SOAP'd: ịkọcha ibe anyị mmemme | Martech Zone
Bọchị Sọnde, Machị 11, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
M debanyere aha maka Sccha Otu Onye Mmemme izu gara aga ma nataworị nyocha dị egwu nke blọọgụ m William Tully. O doro anya na William were obere oge wee dee ezigbo akwụkwọ nyocha nke blọọgụ m. Enwere m ekele na ịkwanyere echiche ya ùgwù - ma kwenye na ntule ya… ugbu a ọ bụ naanị oge na otu esi enweta ya niile!
Ndewo Mr. Karr!
Echere m na enwere m onye iwe n'ihi na ahụmịhe SOAP mbụ m nwere bụ na saịtị gị. ọ dịghị, M ga-esi a seasoned vetiran onye onye, ​​ọma, ọkọkpọhi ya! (ọ ga-adị ka gị SOAPing blog nke Mr. Godin? abụghị ọrụ dị mfe!)
Ugbu a, ozi nke Easton Ellsworth nyefere m bụ:
Douglaskarr.com bụ ihe gbasara "Ntanetị Ntanetị, Mwekota, Njikwa akpaaka, WordPress."
Doug ga-achọ ndụmọdụ na: imalite okporo ụzọ ya, imewe yana njin ọchụchọ ya
Mmeghachi omume mbụ m mgbe m rutere na saịtị gị bụ na m abanyela n'ala AUTOMATION na injinịa. M ga-mgbe ahụ n'ezie mgbagwoju anya site na-amụmụ ọnụ ọchị / ọchị engineer, nanị n'ihi na ha anaghị amụmụ ọnụ ọchị, ma m digress .. Na nnukwu? Akpaaka? na nkụnye eji isi mee, jikọtara na Kwadobe n'akụkụ aka nri, m, ọ mkpu usoro injinịa na akpaaka nke n'ụzọ doro anya, gị blog bụ banyere.
? Na Mmetụta na akpaaka? ? ụdị nduzi na akpaaka
? bu ahia ahia na teknụzụ? ? na-emetụta site na ahia na teknụzụ teknụzụ akpaaka?
Ana m enweta ozi agwakọtara na ọ bụghị nke doro anya, site na nkụnye eji isi mee, ihe ọ bụ na blọọgụ a gbasara. M na-agbagha echiche ahụ na anyị na-akọwa blọọgụ anyị nke ọma na nkụnye eji isi mee, ma ọ bụ na anyị na-akọwa ya na blog. Ọ bụrụ na nkụnye eji isi mee na-enye otu ozi na blog ọzọ mgbe agụ na-ewe iwe. Iji mee ka okwu a kwalite, ọ bụrụ na anyị leruo ụdị edemede 7 kacha elu anya:
Nkà na ụzụ (193)
Ịde blọgụ (95)
Enweghị aha 'akpaaka'. Ee, ọ dị m ka a kwụgidere m otu mkpụrụ okwu, m kwenyere na ọ bụ n'ihi na ọ nweghị ebe ọ dị. Ekwenyere m na ọ bụrụ na edegharịrị akara nke abụọ iji kọwaa akụkụ akpaaka, ọ ga-adị irè karị. Topdị gị kachasị elu bụ? Nkà na ụzụ ?, na karịa kpọmkwem, teknụzụ dị nro. N'ime peeji 10 mbụ nke ụlọ ọrụ teknụzụ gị, enwere naanị posts abụọ metụtara teknụzụ siri ike (ntụgharị. Ngwaọrụ ndị dị ka iPhone) nke ọzọ na-eme ka m jụọ ihe kpatara enwere isi na isi ihe na-egosi? Teknụzụ siri ike ??
Ok, kedụ ihe anyị ji eme gia? Na-emeri ha. Bugharịa gị, ma bugharịa aha / mkpado ahụ n'aka nri na ala ruo mgbe ihe nlere site na eserese gị soro ha nọrọ ebe etiti isi. Ihe osise gị dị na isi na-amasị m? ọ na-enye nnukwu mmetụta enyi na nnabata na blog gị. Ọ bụrụ na enwere onyonyo nke na-abata n'uche ozugbo iji kpochapụ mmetụta injinia usoro, yana ndị ọzọ kwekọrọ n'ihe blọgụ gị bụ n'ezie, jiri ya mee ihe, ma ọ bụghị na-atụgharị gia maka ugbu a.
Usoro nchịkọta nhọrọ kachasị elu na ibe gị dị iche iche na-arụ ọrụ zuru oke ma m ga-ahapụ ya ebe ahụ. Peeji nke igwe ojii a magburu onwe ya na aga m agbanwe ya site na TAGS ruo TAG CLOUD ma oburu na ohere di na menu a. (kwa, na nkọwa banyere otu esi kee ihe a ga-adị mma ka ndị mmadụ nwee ike i copyomi nnukwu echiche gị ma jikọta ya na blọọgụ gị?)
Ndị nkwado vs. Arụ Ọrụ kacha ọhụrụ na peeji nke isi akwụkwọ?. N'elu ileba anya na mbụ ị hụrụ ndị na-akwado ha, debanye aha na ọ bụ mgbasa ozi, ị wee hụ ọrụ ọhụụ nke yiri otu ihe ndị na-akwado ya, ya mere, ọ na-edebanye aha ya na ụbụrụ dị ka mgbasa ozi, na anyị ga-agbadata n'aka nri tupu anyị enweta n'ime anụ nke sidebar gị. Ntụziaka m ga-abụ iji ya kee ụfọdụ agba, ma ọ bụ obere ihe dị egwu dị ka? Blọọgụ M Na-agụ?. Ọ bụrụ na ọ dị ka mgbasa ozi, mmetụta enyi ahụ nke foto gị na-amalite ịdị na-ada ngwa ngwa ngwa ngwa.
INba ụba okporo ụzọ:
Um, echere m na m ga-ahapụ gị na nke a, naanị n'ihi na ị nwere ọtụtụ ahịa karịa ka m na-eme .. Ọ dị ka ịjụ onye nnabata n'ụlọ ọrụ ụgbọ ala banyere ụdịdị arụmọrụ? O doro anya, ị nwere ike ịnweta ntakịrị ozi, mana ọ bụghị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ịjụ onye ghọtara ya ma soro ya rụọ ọrụ kwa ụbọchị .. Nke bụ eziokwu bụ na m ga-ajụ gị otu esi anya ụgbọ ala ma ana m arịọ mgbaghara maka egwuregwu dara ogbenye- n'elu ebe a.
Nanị aro m ga-abụ ịdọrọ okporo ụzọ site na nsọtụ. Ọ bụrụ na anyị nwere blog banyere, sịnụ, teknụzụ, anyị na-etinye oge anyị na teknụzụ teknụzụ na ndị ọzọ nwetara ya. Gịnị ma ọ bụrụ na anyị ga-enweta blọọgụ ndị na-ejighị nkà na ụzụ arụ ọrụ, bụrụ ndị ọkachamara, wee dọta okporo ụzọ dị ka ikike.
Blọọgụ teknụzụ na-atụkarị ndị na-achọ ịghọta ya ụjọ, naanị n'ihi na ọ bụ otu ịde blọgụ geek na geeks ndị ọzọ. Anyị maara na ị ghọtara teknụzụ, mana ị nwere ike ịkọwara ya ndị mmadụ anaghị eme ya, na-atụ ụjọ, mana ha chọrọ ịghọta ya? Ọ bụrụ na ị nwere ike, pụọ na teknụzụ teknụzụ, ma gaa chọta ndị na-agụ na fringes ndị na-achọ. gbado anya. N'akụkụ anyị kwesịrị ịkwụsị ịkụ egwu na mmiri miri emi na ndị ọzọ nke sharks, mana ịkwaga n'ime mmiri na-emighị emi ebe ụlọ akwụkwọ azụ dị? ma ọ bụrụ na nke ahụ na-eme Ọ BYLA uche na niile ..
Chọọ ENYERE ENYERE:
Akpa, ị na-achịkwa peeji mbụ nke google mgbe aha gị na-abanye. Tinye ụfọdụ mkpado isiokwu yana aha gị ma ọ dị ka ihe siri ike n'akụkụ nyocha nke ihe. Echere m na ezigbo ajụjụ bụ, gịnị ka ịchọrọ igosi n'okpuru mgbe ndị mmadụ na-achọ? Ọ bụrụ na ị pịnye?douglas karr teknụzụ? mgbe ahu i gosiputara ezigbo mma? Ọ bụrụ n’ịchọrọ igosipụta mgbe mmadụ pịnyere na ‘teknụzụ ?,’ werezie ya, chee na anyị nwere asọmpi siri ike.
Mkpado saịtị gị siri ike, aha nke post ahụ na-egosi n'ebe kwesịrị ekwesị, njikọta njikọ ndị ahụ yiri ka ọ na-arụ ọrụ maka gị. Echere m na iji bulie gị n'ọkwa ọzọ, ị nwere ike ịchọ ntinye nke onye ọkachamara na mpaghara a.
Enwere m olileanya na enyerela m aka iji meziwanye saịtị gị, ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala kpatara echiche maka gị nke ga-eduga gị n'ụzọ ziri ezi. Nke a abụrụla ọrụ siri ike na njedebe m, ma amụtala m ntakịrị, ma achọtala m ọmarịcha isiokwu na saịtị gị.
Ihe kachasị mma, m na-atụ anya ị ga-enweta ọkwa ndị ọzọ n'aka gị n'ọdịnihu.
Ugbu a ọ dị m mkpa ịnweta nyocha m nke saịtị ahụ ahọpụtara ka m mee! Enwere m olileanya na m nwere ike ime nlezianya nyochaa dịka William mere. Daalụ, William! Ugbu a ọ dị m mkpa hichapụ saịtị ahụ ntakịrị! Weta ya? NT…… hichaa ?! Doh!
Gwa gị eziokwu, ọ masịrị m mma ọkọlọtọ. Nye m gia na-enye nkwupụta dị mma n'etiti ochie na teknụzụ ọhụrụ na Douglas A. Karr na-amụmụ ọnụ ọchị iji nyere anyị aka idozi ọdịiche ahụ. Nanị nsogbu m bụ na menu elu (yabụ ndepụta anaghị adị ka o kwesịrị ekwesị).
Ndewo Blog Bloke!
Kedu ihe nchọgharị ị na-eji? Anwalela m na IE7 na XP, Firefox 2, Camino, Safari, wdg. M ga-ahụ ya n'anya ma ọ bụrụ na ị nwere ike iziga m nseta ihuenyo! (ka doug m na ngalaba aha).
Echere m na m doziri menu elu! Daalụ maka ime ka m mara maka nke a!
Ihe m masiri Doug. Nchịkọta nhọrọ ahụ dị mma ugbu a karịa mana m ka na-agha ihu ọchị na gia. 🙂
Enwere m olileanya na ị ga-ada na saịtị m ma mee ka m mara ihe ị chere.
Na na na… mba Kwadobe ma m ọchị ọchị ihu bụ azụ ịnabata onye ọ bụla!
Yabụ ị ga-etinyeghachi foto gị elu ?? M tozuru oke. Ọ nwere onye ọzọ ma e wezụga BB na mụ?
Enwere m ụfọdụ nsogbu n'abalị a na Photoshop ma enweghị m ike ịpinye ya na isi isi ọhụụ na-akụghị. Ọ ga-anọ ebe ahụ otu ụbọchị ma ọ bụ karịa, ana m ekwe gị nkwa!
Enweghị m ike ịgwa gị mmadụ ole kwuru banyere foto a! Ahụrụ m ya n'anya!
PS. Re: “mana ị nwere ike ịkọwara ya ọha mmadụ na - adịghị atụ egwu, mana ọ chọrọ inwe uche maka ya?” Know maara na ọ na-ekwu maka m, ọ bụghị gị? haha
Ekwesịrị m itinye ndụmọdụ ahụ n'uche! 🙂